‘कुनै एक व्यक्तिका कारण देशलाई संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्न हुँदैन’ « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
‘कुनै एक व्यक्तिका कारण देशलाई संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्न हुँदैन’
प्रकाशित मिति : २०७६, २९ पुष मंगलवार ०८:४५
उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे एक असल, शालीन र सुयोग्य नेतृ हुदाहुदै पनि अहिलेको उहाॅको अडान दलगत राजनीतिमा अस्वभाविक हो । संसदीय राजनीतिले व्यक्तिको विशेषता हेर्दैन, दलको स्वार्थ हेर्छ । मूल कुरा यही हो । When in Rome, be asaRoman त्यसै भनिएको होइन ।
संवैधानिक व्यवस्था पालना हुनुपर्छ, डा. शिवमाया सभामूख बन्ने बनाइने भन्ने कुरा तपसिलको कुरा हो । पहिलो कुरा, डा. शिवमायाले उपसभामूख पदबाट राजीनामा नदिई सभामुखको पदमा उम्मेदवारी नै दिन मिल्दैन । त्यसमा पनि त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई override गरेर आफैले अध्यक्षता गरेर आफै सभामुखको उम्मेदवार बनी आफै निर्वाचित भएको self-proclaimed सभामूख बन्न खोज्ने कार्य राज्यविप्लव सरह मानिनेछ । दोश्रो, कुरा डा. शिवमाया सभामूख हुन नसके, अव बन्ने सभामूख बेइमान र अपराधी नै पर्छ भन्ने कल्पना गरिनु झनै हास्यापद हो । डा. शिवमाया भन्दा तगडा प्रोफाइल भएका संसद सदस्य पनि संसदमा थुप्रै छन् ।
उपसभामूखबाट राजीनामा सभामूख बन्नका लागि पहिलो सर्त हो । यदि, उहाॅले राजीनामा नदिए, उहाॅलाई संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याएको अभियोगमा गिरफ्तार गर्न र मुद्दा चलाउन राज्यको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्छ । मुख्य कुरा, उपसभामूखबाट राजीनामा नदिएर र सभामूखको निर्वाचन प्रक्रिया समेत अगाडि नबढाएर उहाले संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउनुभयो । यस अवस्थामा राज्यले सहज बाटोबाट अवतरण गराउन उहाॅलाई पार्टीको पहलमा संसद सदस्यताबाटै खारेज गरिदिन पनि सक्छ । यसकारण, उपसभामूख डा. शिवमाया प्रकरणमा पार्टी नेतृत्व पंक्तिको अवज्ञा गर्दा उहाॅलाई ठूलो राजनीतिक क्षति हुनसक्छ ।
अर्को कुरा, उहाॅले उपसभामूखबाट राजीनामा दिएपछि उहाॅलाई नै पार्टी नेतृत्व र संसदले समेत सभामूख पदको उम्मेदवार बनाउन बाटो खुल्नसक्छ भन्ने विषय पनि जीवितै रहन्छ । अहिलेको डा.शिवमायाको अडानमय प्रकरणबाट constitutional break down हुन्छ, जुन पेचिलो राजनीतिमा प्रश्न र जटिल तथा गंभीर संवैधानिक समस्या हो । कुनै एक व्यक्तिका कारण देशलाई संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्न हुदैन ।
धेरै जनाबाट यो विषयलाई व्यक्तित्व र समावेशीता तथा महिला सशक्तिकरणको दृष्टिमा मात्र हेरिएको छ; त्यो दृष्टि एकांकी हुनथाल्यो, किनभने यस प्रकरणबाट संवैधानिक प्रक्रियामा नै अवरोध पुगेको छ । संसद बैठक चल्न सकेको छैन, सभामूख चुन्न सांसदहरूलाई दिइएको छैन । यसर्थ, उपसभामूख डा. शिवमायाको राजीनामा उहाॅ सभामूख बन्नका लागि मेरो विचारमा पहिलो र एकमात्र सर्त हो ।